kooxda Barcelona oo guul daro kala kulantay Kooxda Celta Vigo +Sawiro – Gool FM
Sababta dhabta ah uu Pogba kaga tagayo Manchester United oo la ogaaday
Gabriel Jesus iyo Mauro Icardi oo diirada u saaran mid ka mid ah kooxaha ugu xooggan Yurub
Alvaro Morata oo magacaabay kooxaha u sharaxan hanashada tartanka UCL, kaddib guushii ay xalay ka gaareen Liverpool
Arsenal oo xiddig cusub ka dooneysa horyaalka Bundesliga ee dalka Germany
Atletico Madrid oo noqotay kooxdii saddexaad ee shabaqeeda ka ilaashata Liverpool xilli ciyaareedkan
Kooxda Mogadishu City Club oo ku jirta diyaar-garowgii ugu dambeeyey ka hor kulankooda Gaadiidka… + SAWIRRO
Tababare Jurgen Klopp oo ka hadlay dhaawaca Kabtan Jordan Henderson
Kulan ka tirsan horyaalka Somali Premier League oo galabta lagu wado inuu ka dhaco garoonka Eng Yariisow
War cusub oo ka soo baxaya xiisihii ay Bayer Munich u qabtay Leroy Sané
Xiddig ka tirsan Real Madrid oo si cad u sheegay inuusan hubin mustaqbalkiisa Santiago Bernabeu
kooxda Barcelona oo guul daro kala kulantay Kooxda Celta Vigo +Sawiro
Bashiir May 4, 2019
(Spain) 4 Maajo 2019 Kooxda Celta Vigo ayaa guul sahlan oo 2-0 ah ka gaartay Kooxda Barcelona oo ay u ciyaarayeen magacyo aan sameen laheen.
Qeebtii koowaad ee kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Barcelona Celta Vigo iyo Barcelona ayaa ku dhamaaday bar-baro gool la’aan xili labada koox ay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan.
Safka Kooxda Barcelona ayaa ahaa mid ay ka dhex muuqdeen xidigo da’yar ah oo tayo wanaagsan lahaa, dhica kale ciyaartoyda Kooxda Celta Vigo ayaa sameenayey isku dayo badan oo gool loo filan karay qeebtii koowaad ee ciyaarta.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ku soo idlaaday bar-baro gool la’aan, nasiino kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo ka xiiso badmeed qeebtii hore.
Kooxda Celta Vigo oo ku ciyaareysay garoonkeeda ayaa aheyd mid ka fursado badan dhigeeda Kooxda Barcelona iyaga oona ugu dambeen helay goolka koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey xidiga lagu magacaabo Gomez daqiiqadii 67-aad ee ciyaarta.
Ciyaartoyda Kooxda Barcelona ayaa awoodi waayey in ay iska soo gudaan goolka deenta ee lagu lee yahay balse nasiib daro waxaa mar labaad laga dhaliyey gool labaad oo rigoore ahaa waxaana ka dhaliyey Aspas daqiiqadii 88 aad ee ciyaarta.
Ugu dambeen kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Celta Vigo iyo Barcelona ayaa ku soo idlaaday 2-0 oo ay ku adkaadeen Kooxda Celta Vigo.
Liverpool oo guul ay u dhibtootay ka gaartay Kooxda Newcastle United misane dib ugu soo laabtay hogaaminta horyaalka + Sawiro
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay Liiska xidigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka maanta ee Villarreal